Andrea Pirlo Oo Saadaaliyay 4-ta Kooxoo Ee Ku Dhamaysan Doona 4-ta Boos Ee Ugu Sareeya Serie A-da, Ayuuse U Saadaaliyay Champions League – Wararka Ciyaaraha Maanta
Andrea Pirlo Oo Saadaaliyay 4-ta Kooxoo Ee Ku Dhamaysan Doona 4-ta Boos Ee Ugu Sareeya Serie A-da, Ayuuse U Saadaaliyay Champions League
March 25, 2019 kooxda Serie A, Wararka Maanta 0
Halyeeyga Kooxda Juventus ee Andrea Pirlo ayaa saadaaliyay 4-ta kooxood ee ku dhamaysan doona kaalmaha ugu sareeya ee horyaalka Serie A-da halka uu sidoo kale saadaaliyay kooxda ku guulaysan doonta tartanka champions league xilli ciyaareedkan.
Andrea Pirlo ayaa sheegay in ay sanadkan tahay sanadkii ay kooxda Juventus kor u qaadi lahayd tartanka ugu qiimaha badan yurub ee Champions League.
Kooxda Juventus ayaa gaadhay 8 dhamaadka tartanka champions League kadib markii ay guul 3/0 ah ka gaadhay kooxda Atletico Madrid.
Pirlo oo la hadlaya wargayska La Gazzetta dello Sport ayaa yidhi”Waxa aad samayn kartaa soo laabasho cajiib ah marka aad awood badantahay, Juventus kuma jirin qaab fiican kulankii ka dhacay Madrid, Laakin mar aad ku guulaysanayso wax weyn waxa lagu gartaa in ay dhacaan waxyaabo aan dabiici ahayn”.
Dhanka kale Pirlo ayaa saadaaliyay in 4-ta kooxood ee ku dhamaysan doona 4-ta boos ee ugu sareeya Serie A-du noqon doonaan kooxaha Juventus, Napoli, Inter Milan iyo Ac Milan.
kooxaha Juventus, Napoli, Inter Milan iyo Ac Milan ayaa haatan ku jira boosaska ugu sareeya sidaas darteed Pirlo ayaa aaminsan in ayna sidaas waxba iska badali doonin xilli 10 kulan ka hadhsantahay dhamaadka horyaalka.
“Kala saraynta horyaalka Serie A-da ayaa ahaan doona sida ay haatan yihiin dhamaadka xilli ciyaareedkan”.ayuu yidhi.
Kooxda.com ayaa xusaysa in Pirlo yahay xiddiga kaliya ee Serie A-da u soo wada ciyaaray kooxaha Inter Milan, Ac Milan iyo Juventus.